भैरव अर्याल का निबन्धहरु: केही राष्ट्रिय रोग : एक अनुसन्धान
त्यसैले त आजदेखि यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार मैले लिँदै छु । मैले नै नलिई नहुने कारण अर्को के पर्‍यो भन्नुहुन्छ भने मेडिकल साइन्स हाम्रो विध्या नै होइन । समुन्द्रपारिको साइन्स पढेर टुकुचावारिपारिका रोगहरुको रिसर्च कसरी गर्ने ? मेडिकल साइन्स मात्र पढेको डाक्टरसाहेब कसैलाई एक दिन बिहान विष्णुमतीको भ्रमण गराइदुनोस्, त्यहाँको पोजिसनबद्ध प्रोसेसन देख्ता उहाँ पक्कै सोच्नुहुनेछ काठमाडौँमा कलेरा बढेछ । वास्तवमा त्यो कलेरा होइन, काठमाडौँ सहरको टिपिकल रोग हो भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बताइदेओस् । त्यस्तै दिन बैँसैमा कुप्रिएका कतिपए तन्नेरीलाई देख्ता डाक्टरसाहेब आत्तिँदा हुन्... धनुष्टङ्कारले धेरैमाई खतम पार्न लागेछ; वास्तवमा उहाँलाई कसले बताइदेओस्; यो धनुष्टङ्कार होइन, पौने पेटको चमत्कार हो । अधिकांश नेपालीहरु साँझबिहान पौने पेट पाने- रोटी, दिउँसो होटेलमा हाफ प्लेट आलुदम खान्छन् भन्ने रहस्य मेडिकल साइन्सका पुस्तकमा कहाँ लेखेको छ र ? हामी भिँडेखोर्सानीमा भिटामिन ‘ए’ पाउँछौँ, भ्यान्टामा भिटामिन ‘भि’ देखि ‘जेड’ सम्म; टिनका भाँडाकुँडामा परेजति पदार्थ स्वत: प्रोटिन भैहाल्छन्; कालो भाँडामा पाकेजति सबै क्याल्सियम । त्यसैले त म भन्दै छु अब धन्वन्तरिको आयुर्वेद, हिप्पोक्रेटिसको एलोप्याथी र ह्यानिम्यानको होमियोप्याथी कुनैबाट पनि हाम्रो देशका खासखास रोगको पत्ता लाग्न सक्तैन ! तर धन्दा नमान्नुहोस्, शास्त्रै नयाँ आविष्कार गरेको छु- आधुनिक नेपालोप्याथी ।
यो नयाँ अनुसन्धान र आविष्कारमा लागेबापत मैले पनि कमसे-कम हाललाई कायममुकायम डाक्टरको दर्जा त पाउनै पर्ने हो, तर हाम्रो समाजको आधुनिक परम्परा अलि बेग्लै छ, मैले रोगहरुको अनुसन्धान गर्न लागेको सुइँको पाउनासाथ कतिपय डाक्टरहरु हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्‍यो भनी उजुर गर्न पाल्नुहुनैछ; कोही इष्टमित्रचाहिँ यो छुसीले चाहिँदो- नचाहिँदो आयक्टिभिटी देखाएर हामीभन्दा पुग्ने दाउ ल्यायो भनी खुट्टो तान्न थाल्नुहुनेछ । कोही बान्धव फलानाको मगज त सुइँकेछ नि भन्दै सम्भावित मेन्टल हस्पितलको पेसेन्टलिस्टमा मेरो नाम दर्ता गराउन पुग्नुहुनेछ भने कुनै हितैषि साथीले चाहिँ फलानाको दृष्टिकोण अलि वक्र छ है भन्ने जनाउ ठाउँमा पुर्‍याएर भद्रगोल जेलको वेटिङ लिस्टमा मेरो नाम टिपाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । तर जोसुकैले जेसुकै भने पनि मेरो अनुसन्धानलाई भोलिको समाजले ठीक भन्नुपर्नेछ र मरणोपरान्त एउटा ठूलो पुरस्कार मेरो नाममा पन्छाइनेछ भन्ने निश्चित छ ।
नं. ४- नेपालोप्याथीअनुसार अर्को एउटा चर्को रोग पत्ता लागेको छ- कन्सुत्ले । कहाँकहाँ कसकसले केके कुरा गरे, ती सबै पहिले शान्त भएर आफ्नो कानभित्र पर्नु र जोजोसँग सम्बन्धित छ, उसउसका कानमा सुलुत्त पसालिदिनु कन्सुत्ले रोगको प्रमुख लक्षण हो । कन्सुत्ले लागेका रोगीहरु जाँचताकाका टयुसन मास्टरझैँ अथवा सोह्रसरादका पुरेतबाजेझैँ अथवा भनूँ दसैँका फौबन्जारझैँ चौबीसै घण्टामा पच्चीसतिर पुगेर कुराको लेनदेन गर्दछन् । कतै केही पाइएन भने ‘बुझ्नुभो फलानाज्यू, तपाईंलाई फलानाले फलान्थोक भन्थ्यो है’ भनी मनगढन्त कुरा सुनाएर पनि कन्सुत्लाहरु एकअर्काका बीच फाटो पारेर आफ्नो जिभ्रो कन्याउँछन् । ‘फलानाले फलानो दिन ठीक यति बजे यतिपल्ट डकार्‍यो; त्यसैले त्यो दिन राति उसले कतैबाट एउटा बासी पेडा खाएको हुनुपर्छ’ भन्ने जस्ता अनुमान गरि त्यो पेडा ख्वाउने को होला र किन ख्वायो होला भनी गम्दागम्दै रातभर ननिदाउने कन्सुत्ले रोगीहरु पनि मैले धेरै पत्ता लगाएको छु ।
Posted by Yagya Gaire at 6:02 PM
thank you for this.I've searching this foralong... :)